» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ५ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ५ (भिडियो)
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २५ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस अघिको भिडियो सामाग्रीको चौथो भागसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएकाहरुमध्ये २० जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । यदि तपाईले उक्त भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो पाँचौँ भागमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ भिडियो–
झुप्री भण्डारी,अछाम–१० वर्षको उमेरदेखि नै गीत गाउन सुरु गरेकी झुप्री भण्डारी अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाईरल छिन् । कमल भण्डारीको सहयोगमा भ्वाईसको मञ्चसम्म आएकी झुप्रीले अपाङ्ग भएकै कारण सामाजिक दुव्र्यव्यहार समेत सहेको बताउँछिन् । भ्वाईसको मञ्चमा उनको आवाज गुञ्जिएपछि संसार नदेखेका उनका आँखाले दर्शकको माया र सद्भाव महशुस गर्न पाएका छन् । आफ्नै रचनामा गीत गाउने झुप्रीले ब्लाईन्ड अडिसनमा देउडा भाका गाएकी थिईन् । उनको आवाज सुनेर चारै जना कोच फर्किएका थिए । उनी सिजन २ मा सबै कोचलाई फर्काउन सफल नवौँ प्रतिभा हुन् । उनी कोच आश्थाको टिममा छिन् ।
सञ्जय महत, डिल्लीबजार, काठमाडौँ–सानैदेखि सुपर न्याचुरल पावरमा आकर्षित सञ्जय नरम दिलका छन् । सुमधुर गीत गाउने सञ्जयलाई धेरैले ड्राकुला भनेर चिन्छन् । उनले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘चौबन्दी चोलो’ बोलको गीत गाएका थिए । २६ वर्षीय सञ्जयको आवाज सुनेर चारै जना कोचहरु फर्किएका थिए । उनी कोच राजु लामाको टिममा छन् ।
नविना जोशी,बालाजु, काठमाडौँ–रेडियो नेपालमा बुवाले गीत गाउँदै गर्दा संगीतमा रुचि राखेकी नविनाले बुवाबाट नै सारेगम सिकेका हुन् । ३० वर्षीय नविनाले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘सम्हाली राखे मैले’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाजमा कोच आश्था राउत फर्किएकी थिईन् ।
शिवा गीरी, कपिलवस्तु, हाल काठमाडौँ–सँगीत सिक्नका लागि कपिलवस्तुबाट काठमाडौँको यात्रा तय गरेकी शिवालाई संगीत क्षेत्रमा लाग्न आमाको साथ छ । सुरुमा बुवाको खासै सहयोग नभएता पनि अहिले भने परिवारको नै सहयोग रहेको उनी बताउँछिन् । उनले उदय सोताङ र मनिला सोताङको आवाजमा रहेको ‘माया नमार है’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । २५ वर्षीया शिवाको आवाज सुनेर कोच दिप फर्किएका थिए ।
कमल विष्ट, टिकापुर, कैलाली–शास्त्रीय संगीत सिक्दै गरेका कमल विष्ट टिकापुर कैलाली निवासी हुन् । गाउँमा सामान्य गाउन सिकेका कमलले काठमाडौँमा संगीतको शिक्षा लिएका हुन् । राग बागेश्वरी गाएका २४ वर्षीय कमलको आवाज सुनेर चारै जना कोच उनीतिर फर्किएका थिए । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी ५ प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा कुन प्रतियोगीहरु फाईनलसम्म पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको छैटौँ भागका साथै भ्वाईस अफ नेपाल सम्बन्धी अन्य जानकारीहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।